L2 Tshintsha abavelisi kunye nababoneleli - China L2 Shintsha ifektri
S4600-28X-SI 10G Intelligent Ethernet yokuTshintsha ukuFikelela
I-S4600-28X / 52X-SI yi-L2 10G uplink switch ekrelekrele eyilelwe umphathi wenethiwekhi kunye ne-MAN. Ixhasa i-QoS ebanzi, imisebenzi ye-VLAN ephuculweyo (i-Dynam VLAN, i-Voice VLAN, iQinQ, i-N: i-1 VLAN Translation njl.njl. ), imisebenzi yokulawulwa kunye neenkonzo zokuDlala eziThathu ezizalisekisa iimfuno zenethiwekhi ezifunwa yinethiwekhi yenethiwekhi, ukufikelela kweMAN. S4600-2 ...
S4600-SI Gigabits Dual Stack Tshintsha okrelekrele
I-DCN S4600-SI uthotho luzele lutshintsho oluzimeleyo lwe-GbE lubonelela ngokufikelela kwinqanaba lokushishina kwikhampasi kunye nokusetyenziswa kwesebe. Olu tshintsho lulawulwe ngokupheleleyo lunokubonelela ngeempawu eziphambili zeLayer 2 kunye naMandla anganyanzelekanga ngaphezulu kwamandla e-Ethernet Plus (PoE +). idibanisa imisebenzi yolawulo oluphambili kunye nokhuseleko ukubonelela ngokusebenza kunye nokusasazeka. Sisisombululo esifanelekileyo sokuhanjiswa kwenethiwekhi. Iimpawu eziphambili kunye neeMpawu eziPhambili ze-Green Energy S4600-SI zilandelelana ne-IEEE ...
S4200-SI Series L2 Gigabits Dual Stack Ingqondo Tshintsha
I-DCN S4200-SI uthotho luyabiza iindleko zokutshintsha kwe-GbE ezimeleyo zibonelela ngokufikelela kumgangatho wokushishina kwikhampasi kunye nokusetyenziswa kwesebe. Olu tshintsho lulawulwe ngokupheleleyo lunokubonelela ngeempawu eziphambili zeLayer 2 kunye naMandla anganyanzelekanga ngaphezulu kwamandla e-Ethernet Plus (PoE +). Yenzelwe ukusebenza ngokulula kokunciphisa iindleko ezipheleleyo zobunini, zenza ukuba imisebenzi eshishinayo, ekhuselekileyo kunye neyonga amandla yokusebenza ngeenkonzo ezikrelekrele. Iimpawu eziphambili kunye neeMpawu eziPhambili zoMbane oMbane oMbane we-S4200-SI zihambelana ...